မြားတစ်စင်း ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီ (end) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မြားတစ်စင်း ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီ (end)
မြားတစ်စင်း ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီ (end)
Posted by မောင် ပေ on Oct 9, 2011 in Creative Writing, Short Story, Think Different | 8 comments
( ရှေးဦးစွာ ကျေးဇူးတင်စကားလေး အနည်းငယ် ပြောကြားလိုပါသည် ။ မြားတစ်စင်း ၂ ကို တင်အပြီးတွင် မိတ်ဆွေဖြစ်သူ comegyi မှ စေတနာဖြင့် ကျွန်ုပ် လွဲမှားနေသော စာလုံးပေါင်းကို ထောက်ပြလာပါသည် ။ ဟုတ်ပါသည် ။ မြှား ဟု သုံးခဲ့မိပါသည် ။ ယခု မူ မြား ဟု ပြင်ပြီးသွားပါပြီ ။ ကျေးဇူးကြီးလှပါသည် ကမ်းကြီး ရေ ၊ အညာဆေးရိုး ရှဲရှဲနီ )
မန်းတလေး မြို့ ရှိ နာမည်ကြီး အသားကင်ဆိုင် တစ်ဆိုင်တွင် ကိုရှီနို နှင့် ကမ်းကြီး တို့ အတူတကွ စားသောက်နေရင်း ကမ်းကြီးတစ်ယောက် အမူးလွန်ကာ ဇက်ကျိုးသွားခဲ့သည် ။
( စကားချပ် ။ ဇက်ကျိုးသည် ဆိုသည် မှာ အရက်သောက်သူများ အသောက်များပြီး မှောက်သွားခြင်းကို တင်စားခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။ ဇက်ကျိုးသေခြင်း မဟုတ်ပါ )
ကိုရှီနို တစ်ယောက် အလုပ်များသွားလေတော့သည် ။
ကမ်းကြီးဆိုင်ကယ် ကို တစ်ည အပ်ထားခဲ့ဖို့ ခွင့်တောင်းရလေသည် ။
ထို့ နောက်တွင်မှ ၊ လေးဘီးကား တစ်စီးငှားကာ ကမ်းကြီး ကို တင်ပြီး ၊ ဘယ်ပို့ ပေးလို့ ပေးရမှန်းမသိ ဦးစား(အုန်းစား)သွားသည် ။
နောက်ဆုံးကြံရာမရ သည်နှင့် ကမ်းကြီးအင်းကျီ၊ဘောင်းဘီ အိတ်ကပ်တွေထဲ လိုက်နှိုက်ရှာကြည့်တော့….
ပထမဆုံး တွေ့ ရသည် မှာ ကွန်ဒုံး တစ်ဘူး ။ စီးကရက်ဘူး တစ်ဘူး ။ မီးခြစ် တစ်လုံး နှင့် ဖုန်းတစ်လုံး ၊ ပိုက်ဆံအိတ် နှင့် လိပ်စာကဒ် များ ။
သူ့ လိပ်စာကဒ်များထဲမှ တစ်ယောက်ချင်းစီ ကို ဖုန်းဆက်ကြည့်ပြီး ကမ်းကြီး အိမ်လိပ်စာ ကို မေးကြည့်သည် ။
သုံးယောက်မြောက် တွင်မှ ကမ်းကြီး အိမ်လိပ်စာကို သိခွင့်ရလိုက်သည် ။
ပြည်တော်သာ အိမ်ရာ မှာ နေတာတဲ့ ။ သို့ နှင့် လေးဘီးဒရိုက်ဘာ ကို ထိုသို့ ဦးတည်ခိုင်းလိုက်သည် ။
ပြည်တော်သာ အိမ်ရာ ဆိုသည် မှာ ဝန်ထမ်းများ နေကြသော တိုက်ခန်းများ ဖြစ်သည် ။
ကိုရှီနို စိတ်ထဲတွင် ဇဝေ ဇဝါ တွေ ဖြစ်လာသည် ။
သူသိထားတာ ၊ ကမ်းကြီးကို လူကြီးသား ၊ နေတော့ ပြည်တော်သာ ဆိုတော့ ၊ ကီးကြောင် နေသလိုလို စိတ်ထဲ ဖြစ်လာသည် ။
သူမှန်းထားသည့် လူကြီးသား ဆိုသည်မှာ သည်လိုနေရာမျိုးမှာ နေတာမဟုတ် ။ ထား..
သို့ ဖြင့်… ပြည်တော်သာ တိုက်ခန်းသို့ ရောက်သောအခါ ၊ ကမ်းကြီး ၏ အခန်းကို လိုက်ရှာကြလေသည် ။
အခန်း နံပါတ် ၅၄ ၊ အခန်းပေါက်တွင် တပ်ထားသော ဆိုင်းဘုတ် ကို မြင်လိုက်ရသော အခါ မှ ကိုရှီနို တစ်ယောက် အမူးပြေ ကာ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်သွားတော့လေသည် ။
ဆိုင်းဘုတ်တွင် ရေးထားသည်ကား “ ဦးလူကြီး ၊ သန့် ရှင်းရေးဌာန ” တဲ့လေ……
လေးဘီး ဒရိုက်ဘာ နှင့် ကိုရှီနို တို့ကမ်းကြီးကို ပွေ့ ချီလာပြီး ၊ အခန်းရှေ့ တွင် ချပြီး ၊ အခန်းတံခါးကို ခေါက်လိုက်ကြသည် ။
အခန်းထဲ မှာ အသက်၅၀ကျော်အရွယ်ရှိ ယောက်ျားကြီး တစ်ဦး ထွက်လာသည် ။ ကိုရှီနို တို့ ကို မြင်သွားသော အခါ ချက်ချင်း တန်းသဘောပေါက်သွားပြီး
“ တောက်…ဒီကောင် ကမ်းကြီး ၊ ငါ အကြိမ်ကြိမ် ဆုံးမနေတဲ့ကြားက ဒီအရည်တွေ သောက်လာပြန်ပြီ..သိကြသေးတာပေါ့ကွာ ”
ဘိုးဒေါ်လည်း ဒေါသတကြီး ဖြင့် အခန်းထဲ အမြန်ပြန်ဝင်သွားပြီး ၊ ရေပုံးကြီး တစ်ပုံး ဆွဲကာ ပြန်ထွက်လာသည် ။
မူးမှောက်ကာ ပက်လက်ကလေး ဖြစ်နေသော ကမ်းကြီးအပေါ် ခေါင်းမှ လောင်းချ လိုက်လေတော့သည် ။ ဘွမ်းးး….
“ ဝူးဝါး..ဝူးဝါး..ဟေ့..ဘယ်ကောင်တုန်း ၊ ငါ့ကို ရေနဲ့ လောင်းတာ ၊ ငါလို လူကြီးသား ကို ရေနဲ့ လောင်းရဲတဲ့ကောင် နာပြီသာမှတ်..ဟမ် ”
“ အောင်မာ..အောင်မာ..လာလာချည်သေး…လူကြီးသားတဲ့…ဟုတ်လား..ဟေ့ကောင်၊အခုချက်ချင်း ထကြည့်စမ်း ၊ မင်းကို ရေနဲ့ လောင်းတာ လူကြီးဆိုတဲ့ မင်းအဖေ ပဲကွ ”
ဘိုးဒေါ် ၏ အသံကို ကြားသည်နှင့် ကမ်းကြီး တစ်ယောက် ပြူးတူး ပြဲတဲ တန်းထ လာသည် ။
“ ဟာ..အဖေ..ဘယ်လို လုပ် အဖေ ရောက်လာတာလဲ ဟင် ၊ အသားကင်ဆိုင် ကို ”
“ ဟေ့ကောင် မူတူး..မင်းဘယ်ရောက်နေလဲ ဆိုတာ ပြန်ကြည့်လိုက်ဦး ” ထိုအခါမှ သူ့ တိုက်ခန်းရှေ့ သူ ပြန်ရောက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကမ်းကြီးသိသွားသည် ။
ကမ်းကြီး တစ်ယောက် ရှက်ကိုးရှက်ကန်း နှင့် ကိုရှီနို့ ဘက် လှည့်ကာ
“ အားနာလိုက်တာ ကိုကြီး ရယ် ၊ ညီလေး နဲနဲလေး များသွားတယ်ဗျာ ”
ကိုရှီနို တစ်ယောက် စိတ်ပျက်လက်ပျက် ညည်းတွားသံဖြင့်
“ ဟေ့..သင်္ကြန်မှာ မဏ္ဍပ်တုန်းက မင်းကို လူကြီးသား ဆိုပြီး ဝိုင်းခေါ်နေကြတာ ကို မြင်လို့၊ ငါ့မှာ တစ်ကယ်ကို လူကြီးသား မှတ်နေခဲ့တာကွာ ”
“ ဗျာ..မဟုတ်လို့ လား ဗျာ ၊ ဒီမှာလေ..ဒါ ကျွန်တော့် အဖေ ဦးလူကြီး ၊ ကျွန်တော် က သူ့ ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သား ၊ သူ့ ရဲ့ အချစ်ဆုံး ပူတူတူးလေး က ကျွန်တော် ၊ ဒီတော့ ကျွန်တော်မှ လူကြီးသား မဟုတ်ရင် ဘယ်ကောင် က လူကြီးသား ဖြစ်တော့မှာလဲ ကိုကြီးရ ၊ ပြောစမ်းပါဦး ”
“ အေးပါကွာ..၊ ငါက မင်းကို တစ်ကယ့် အရာရှိကြီးသား မှတ်ပြီး မင်းနဲ့ အတူ စီးပွားရေးအတူ တွဲလုပ်မယ်လို့အိပ်မက်မက် စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တာကွ ၊ ငါ လောဘ ကြီးသွားခဲ့လို့အမှတ်တွေ မှားကုန်တာပါ ၊ ကဲကဲ…ငါလဲ ပြန်တော့မယ် ၊ အန်ကယ်..ခွင့်ပြုပါဦးနော် ”
“ အေးအေး..အန်ကယ့်သား ငမူးကောင် ကို အိမ်တိုင်ရာရောက် ပြန်ပို့ ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ ၊ နောင်လည်း ရောက်ရင် ဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော် ”
လေးဘီးဒရိုက်ဘာ နှင့် ကိုရှီနို တို့ အသားကင်ဆိုင် သို့ ပြန်လာခဲ့ပြီးနောက်
“ ဆရာ..အပိုကြေးလေးတော့ ပေးလိုက်ပါဦး ”
“ ဟာဗျာ…ပွိုင့်မှားသွားလို့ မှ စိတ်ပျက်ရတဲ့ အထဲ ၊ ခင်ဗျား က တမှောင့် ၊ ရော့ရော့ ၁၀၀၀ ”
“ ၁၀၀၀ ကတော့ မနဲဘူးလား ဆရာရယ် ၊ ကျွန်တော့်မှာ ဟိုငမူး ကို ကူသယ်ပေးရသေးတယ်လေ ”
“ ကဲဗျာ..ရော့ ၁၀၀၀ ထပ်ယူ ၊ စကားထပ်မများနဲ့ တော့ ၊ ကျုပ် လဲ လစ်ပြီ ”
ထိုည က ပေါက်ဖော် အိမ်တွင် သွားအိပ်သည် ။
“ ဟားဟားဟားဟား…မိအေး နှစ်ခါ နာ ဆိုတာ မင်းလို မျိုး နေမှာ ”
“ မပြောပါနဲ့ တော့ ၊ ကိုပေါက်ဖော် ရာ…ကျွန်တော် ရှက်လွန်းလို့ ပါ ၊ နောက်များဆိုရင် ဘယ်သူ ဘယ်ဝှါ ကိုမှ အားမကိုးတော့ပါဘူး ၊ ကိုယ့်အလုပ်လေး ကို ပဲ အာရုံတစိုက် နဲ့ အလေးထား ဆက်လုပ်သွားပါတော့မယ် ၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင်…ဒီအလုပ်နဲ့ ကျွန်တော် အခုလို ဖြစ်လာတာကို ကျွန်တော် မေ့နေခဲ့တာဗျ ၊ မနက်ဖန် က စပြီး ၊ ကိုပေါက်ဖော် နဲ့ ပဲ ၊ ကျောက် ဝိုင်း မှာ ဆက်ကြိုးစားတော့မယ် ဗျာ ”
“ အဲဒါ အကောင်းဆုံး ပဲပေါ့ကွာ ၊ ငါ က မင်းဘာတွေ အမှားလုပ်မလဲ လို့ တစ်ချိန်လုံး ဘေးက ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ကွ ၊ အခု မင်းဟာမင်း လမ်းမှားနေတာကို သိပြီ ဆိုတော့ ၊ ဘာမှ ထွေထူး မလိုတော့ဘူးပေါ့ကွာ ၊ ငါတို့ အလုပ်က လဲ သေချာ ကြိုးစားမယ် ဆိုရင် ၊ မင်းမျှော်လင့်ထားတဲ့ အတိုင်း ဖြစ်လာမှာ အနှေးနဲ့ အမြန်ပါပဲ ကွာ ၊ ဒီတော့ မနက်ဖန်က စလို့ ၊ အာရုံသာ အထူးစိုက် လုပ်ပေတော့ ၊ အခုတော့ အိပ်လိုက်ဦး ၊ ဂွတ်ည ကွာ ”
“ ဟုတ်…ဂွတ်ည ပါ ကိုပေါက်ဖော် ”
များမကြာမီ ၊ ပေါက်ဖော် နှင့် ကိုရှီနို တစ်ယောက် နှစ်ယောက် ရှယ်ယာဝယ်လိုက်သော ကျောက်စိမ်းတုံး တစ်တုံးမှ သိန်းပေါင်း သိန်းချီ ပြီး ထအောင်သွားကြသည် ။
ထို နေ့ မှ စ၍ ကိုရှီနို တစ်ယောက် မန်းတလေး မှ ပျောက်သွားတော့သည် ။ သတင်းများ အရ ၊ မော်လမြိုင် ဘက်ရှိ သူ့ ရည်းစား နှင့် လက်ထပ်လိုက်ပြီး ၊ စူပါမားကပ် တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ရောင်းချ ကြီးပွား နေသည် ဟူသတတ် ။
ပေါက်ဖော် က မူ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်တော့ဘဲ ၊ ရသမျှ ပိုက်ဆံများ ကို ဘဏ်ထဲ ထည့်ထားပြီး ရန်ကုန်တွင် အခြေချ ကာ သူ အနုပညာ ပါသော စာရေးခြင်း အလုပ်ကို ဇောက်ချ လုပ်ကိုင်နေသည် ဟု ကြားရသည် ။ သူတစ်လ ရသော ဘဏ်တိုး မှာ သုံး၍ဘယ်လို မှ မကုန် ဟု သတင်းကြားရသည် ။
လူကြီးသား ကမ်းကြီး မှာမူ ၊ ရန်ကုန် တွင် အခြေချ ပြီး ၊ မဂ္ဂဇင်း ဂျာနယ်များ မှမကြာခဏ ဆိုသလို စာမူအတောင်းခံရသော ကလောင်စွမ်းထက်သည့် အနုပညာ ရှင် ကဗျာဆရာ၊သရော်စာရေးသူ တစ်ယောက် ဖြစ်သွားသည် ဟူသတည်း ။
ကိုရှီနို တို့ ရပ်ကွက်ထဲ မှ ဆမူး မှာ မူ အထည်ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်ကြီး တစ်ဦး အဖြစ်လည်းကောင်း ၊ ဘုံဆိုင် ပိုင်ရှင် ကိုဘဲလူး မှာ မူ စက်ရုံပိုင်ရှင်ကြီး တစ်ဦး အဖြစ်လည်းကောင်း ဖြစ်သွားကြသည်ကို တွေ့ ရှိကြ ပါသည် ။
xxxxxxxxxxxxxxxx ပြီးပါပြီ xxxxxxxxxxxxxxxx
—————————- အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် —————————-
ကိုဘဲလူးဘုံဆိုင်က ခွက်ပုန်း အတိုးတောင်သွားမဆပ်နိုင်သေးတာကို..ဘဏ်တိုးပဲ ထိုင်စားရဦးမယ်..
နောက်ခါ ပေါက်ဖော်နဲ့ မသောက်နဲ့ ..ကိုရှီနိုနဲ့ ပဲသောက်..
ပေါက်ဖော်နဲ့ သောက်ရင်..လေးဘီးနဲ့မပြန်ပို့ ပဲ..၂ယောက်သား လေးဘက်ထောက်ပြန်ရလိမ့်မယ်..
ဇာတ်ကတော့ ပေါင်းခဲ့လေပြီ။ ဇာတ်မှာ ပါတယ်ဆိုလို့ ဘယ်နေရာကပါရ ပါရ ဆိုပြီး ၀မ်းသာလုံးဆို့နေတာ ။ အနည်းဆုံး ဆိုက်ပါ့တ်(ဖြတ်လျှောက်)လောက်ဖြစ်ဖြစ် ပါရလည်း နည်းလားဆိုပြီး ကျေနပ်နေတာ ။ ပြီးတော့မှ လား . .လား . . ဇာတ်ကလည်း နာချက်က။ တော်သေးတယ် ဇာတ်သိမ်းမှာ တမလွန်ကိုမူးပြီးမြန်းသွားတယ် မလုပ်သွားလို့ ကိုရင်ပေရေ့………..ခွိခွိ ……။
သူ အနုပညာ ပါသော စာရေးခြင်း အလုပ်ကို ဇောက်ချ လုပ်ကိုင်နေသည် ဟု ကြားရသည် ။
ကိုပေရေ။ ဒီနေ့ စာဖတ်ရင်း အကျအပေါက်တွေပဲ လိုက်ကြည့်နေမိလားမသိပါဘူး။
သူ ၀ါသနာ ပါသော စာရေးခြင်း အလုပ်ကို ဇောက်ချ လုပ်ကိုင်နေသည် ဟု ကြားရသည် လို့
ကို ချောကလက် … အဲ ဘက်လက်ချောရေ … ရှင်ရေးပြမှပဲ … သေချာတွေ့တော့တယ် … . ကျွန်မတို့တွေ … စိတ်မှန်းနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖတ်သွားတာတော့ ..ဟုတ်နေတာပဲ … :D
ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်ဆိုတာ .. တကယ်မှန်တာကိုး
အထည်ချုပ်စက်ရုံသူဌေး ဘ၀တော့ မရောက်မရစေနဲရကွယ်
သတ်ပုံ လိုက်စစ်တာ မဟုတ်ရပါ။
သေသေချာချာ ဖတ်ကြောင်း သိစေချင်တဲ့ အတွက်
ကျွန်တော် ရေးသမျှ စာတိုင်းမှာ
ဆိုတာ အားလုံး အတွက်ပါ
သတ်ပုံဆိုလို့လေ … ဟိုးတစ်လောက … ဗေဒင်ဆရာမဆီ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သွားတာ … သူပြောတဲ့ စကားလေးမှတ်မိနေတယ် … ကောင်မလေးကို သူ့နာမည် သူချရေးခိုင်းတာတောင် မှားရေးလို့လေ .. လူတွေအများကြီး ထိုင်နေလို့ ကောင်မလေးလည်း … ဘာမှ မဟုတ်ပဲ နည်းနည်း ဒူးတုန်မှာပေါ့ … ရေးပြီး ပြီးရောဆိုပြီး အမှတ်နဲ့ရေးပေးလိုက်တာ …. ကျွန်မတို့ နည်းနည်း စိတ်ဝင်စားကြတယ် ..အဲ့ဒီဗေဒင်ဆရာမကစကားပြောလျှင် နည်းနည်း တင်စီးလိုက်ရမှ ကျေနပ်တဲ့ လူလေ … ။ ဘာများပြောမလဲ မျှော်လင့်နေတုန်း …သတ်ပုံမှားလျှင် ဘ၀ပျက်တယ် ဘာမှတ်လဲတဲ့ .. ဟီး ရယ်ရတယ်..စာလေး မှားတာနဲ့ ဘာလို့ ဘ၀ပျက်ရပါလိမ့်ဆိုပြီး … ကျွန်မပါးစပ်က မရည်ရွယ်ပဲ ထွက်သွားတော့ .. ယမ်းပုံပေါ် မီးကျသလို .. ချက်ချင်း ပက်ခနဲ့ ပြန်ပြောပါတယ် .. သီချင်းတောင် ဆိုထားတယ်မဟုတ်လားတဲ့ .. သတ်ပုံမှားတဲ့ ည … ဘ၀ဟာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့.. ဆိုတာလေတဲ့.. အဲ့ဒါအလကားမဟုတ်ဘူးတဲ့ .. တဘောင်တဲ့လေ … ။
ဟုတ်လည်း မဟုတ်ပဲ လျှောက်ပြောတယ်ဆိုပြီး… ရယ်ချင်လိုက်တာ တခွီးခွီးနဲ့.. … ဘေးက သူငယ်ချင်း ဆိတ်ဆွဲတော့မှ .. မနည်းမျက်နှာပိုးသပ်ရတယ် … ဟိုးတစ်ခါ ပို့စ်ထဲမှာ ရေးဖူးတဲ့ .. အမည်းနဲ့ အနက်ငြင်းတဲ့ ဗေဒင်ဆရာမပါ